30 Responses to “မြေအောက်ကမ္ဘာထဲကအိမ်”
ကျေးဇူးဘဲချောရေ။ လှလိုက်တာ။ တော်တော် creative ဖြစ်တယ်နော်။ ပိုင်ရှင်ကိုယ်တုိုင် ဒီဇိုင်းဆွဲတာလား။ သူများကိုဆွဲခိုင်းပြီး ဆောက်ထားတာလားသိချင်လိုက်တာ။
စကားမစပ်..ချောရဲ့ ပို့ အသစ်လည်းလင့်တက်လာတာမတွေ့ ရဘူး။ ကုိုယ့်ရဲ့ အသစ်လည်း မတက်လာဘူး ဘယ်မှာမှ။ ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလည်းသိပါဘူး။
အိမ်လေးလှလိုက်တာ..နောင်ကျရင် အဲလိုအိမ်လေး တစ်လုံးလောက် ဆောက်ပြီး နေရမယ်... သူတို့ အိမ်လောက်တော့ သားနား ခမ်းနားမယ်တော့ မထင်ပါဘူး။။ ကိုယ်နိုင်သလောက်လေးပေါ့။။ဟေဟေ့။။
အဲကျမှ အလည်လာဖို့ ဖိတ်တော့မယ် မမချောရေ။။။
ဟာ ..အိမ်လေးက နေချင်စရာလေး။
ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးတော့ ပြောတတ်ဘူး၊ အပြင်ဧည့်ခန်းက သစ်သားစားပွဲကြီးကြိုက်တယ်။ ရေသွယ်ထားပုံလည်းသဘောကျစရာ။ မချော ကိုယ်တွေလည်းတွင်းအောင်းရအောင်လေ။
ထူးထူးဆန်းဆန်း အိမ်ကလေးပါပဲ..၊ ရေပိုက်သွယ်ယူပုံ၊ မိလ္လာစနစ်၊ လျှပ်စစ်သွယ်တန်းပုံ စတာတွေကိုတော့ အာခီတက်က အတော်လေး တွက်ချက်ယူရမယ် ထင်တယ်နော်၊ ပြူတင်းပေါက်က လေတဖြူးဖြူးဝင်မှ ကြိုက်တဲ့သူတွေအဖို့တော့ ဒီအိမ်လေးက တမျိုးဖြစ်နေမှာ သေချာတယ်၊ လေဆင်နှာမောင်း မကြာခဏ တိုက်တတ်တဲ့ အရပ်မျိုးမှာ ဆိုရင်တော့ အိမ်ပိုင်ရှင်တွေ အတော်စိတ်အေးရမယ့် အိမ်မျိုးပါပဲ..။း)
September 2, 2011 at 5:09 AM
မြေအောက်မှာဆိုတော့ အသက်ရှုရတော့ နဲနဲ ကြပ်များ နေမလားမသိဘူး။ ဒီက မြေအောက်ရထား ဘူတာရုံတွေမှာလဲ လေအမြဲတမ်းပေးထားပေမဲ့ လှိုဏ်နံ့ လူနံ့တွေနဲ့ အသက်ရှုမ၀သလိုကြီး။
လှတော့လှတော့ ဒါပေမဲ့ အမြဲတမ်းကြီးတော့ အဲဒီလိုအိမ်ထဲ မနေချင်ဘူး။ အလည်အပတ်ဘဲ သွားပြီး တစ်ညနှစ်ည အိပ်တာက ပိုစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းမယ်ထင်တယ်။
မီးဘေးမစိုးရိမ်ရဘူးဆိုပေမဲ့ အဲဒီအိမ်ထဲက မီးဖိုခန်းက စပြီး မီးလောင်ရင်တော့ ပြေးပေါက်က တစ်ဘက်ဘဲ ရှိမယ်ထင်တယ်။ ပိုများ ပြေးထွက်ရခက်နေမလားဘဲ။း))
September 2, 2011 at 7:27 AM
ဟားး တို့အမချောကတော့ တင်လိုက်ရင်
(အဲမမရယ် ဒါပေမယ့် ငလျင်ဆိုရင်ရောဟင် ..)
မြေအောက်ခန်းက အဆောက်အဦးလေးတွေ တစ်အံ့တစ်သြပဲနော်။ ခေတ်ကြီးတိုးတက်လာတာနဲ့ အမျှ နည်းပညာပိုင်းတွေကလည်း အံ့ဖွယ်ပါပဲလား။ တည်ဆောက်တဲ့ပညာရှင်တွေ တော်လိုက်တား)
I like the style and design of the house but I do not want to live in because of the temperature.
The more your room is closer (to the Earth), the more you get colder in the West. That's why the resident ground floors are cheaper.
တောင်စောင်းမှာပဲဆိုတော့ အပေါ်ကနေ မြေပြိုပြီးကျလာမှာကို မကြောက်ရဘူးပေါ့.. ဒါပေမယ့် ရေတိုက်စားလို့ မြေကြီးတွေနဲ့ အိမ်ကြီးပါသွားရင်တော့... အင်း... :D..
ကြောက်တယ် .. နေရဲဘူးးးး ..း))
အစ်မတော့ နေရဲဘူးဟယ်။ အစ်မကလေ အဲ့ဒီလိုမြေအောက်ထဲတို့၊ အရမ်းမြင့်တာတို့ဆို အရမ်းကြောက်တတ်တယ်...။ ဖတ်ရင်းနဲ့တောင် အူယားနေတယ်။ ရှာရှာဖွေဖွေ တွေ့တတ်၊ ရေးတတ်ပါပေ့အေ...။
မှောင်နေမယ်ထင်တာ ခုတော့ လင်းထိန်နေတာပဲ ..
သူများက သရဲတော့ နဲနဲကြောက်တတ်တယ် .. ဟီးး
လှတယ် နေရဲဘူး တချိန်ချိန်တော့ တွင်းအောင်းရင်အောင်း မအောင်းရင် ပြာဖြစ် မယ်မှန်း သိပေမဲ့ ရှင်နေတုန်းတော့ အောင်းရဲသေးဘူး
မမချောရေ.... ပြင်သစ်မှာရယ် သြစတြေးလျမှာရယ် မြေအောက်မြို့ဆိုတာတောင်ရှိတယ်တဲ့..မေလ်းတခု ဖတ်ဖူးတာ ပြင်သစ်မှာကတော့ အလှဆောက်တာဆိုပဲ... သြစတြေးလျ ကတော့ ရာသီဥတုပူလွန်းလို့ မြေအောက်ထဲ ဆင်းနေကြတာတဲ့... ရှော့ပင်းမောလ်တွေ ရုပ်ရှင်ရုံတွေ တောင် ရှိတယ်တဲ့... မမမြသွေးကို အဲဒီမှာ သွားထား ကြရအောင်.....ဟိဟိ ...
ထူးထူးဆန်းဆန်းဘဲနော်... ဆွစ်ဇာလန်သွားဖြစ်ရင် အဲဒီအိမ်လေးကိုသွားလည်ချင်တယ်....
September 2, 2011 at 12:17 PM
တကယ်ကို စိတ်ကူးကောင်းပြီး သေချာဆောက်ထားတာပဲ။ လှပသပ်ရပ်လွန်းပါတယ်။ နေချင့်စဖွယ်ဖြစ်လွန်းတယ်။ အသံတွေဘာတွေလည်း သိပ်ကြားရမှာမဟုတ်လောက်ဘူး။ တိတ်ဆိတ်မယ့်ပုံလေးနော်။
September 2, 2011 at 12:19 PM
တို့ အစ်မကတော့ လုပ်လိုက်ပြန်ပြီဟေ့ အထူးအဆန်းလေးတွေ...
ဒါကြောင့် ဒီကို လာတိုင်း ဗဟုသုတ တစ်ခုမဟုတ် တစ်ခုရတယ်...
တကယ်ကို စိတ်ကူးကောင်းပြီး သေချာဆောက်ထားတာပဲ။ လှပသပ်ရပ်လွန်းပါတယ်။ နေချင့်စဖွယ်ဖြစ်လွန်းတယ်။အသံတွေဘာတွေလည်း သိပ်ကြားရမှာမဟုတ်လောက်ဘူး။ တိတ်ဆိတ်မယ့်ပုံလေးနော်။ (ဒါကကောင်းကျိုး၊ မေသိမ့်ပြောသလိုပဲ ပြောလိုက်သည်)
မီးဘေးလည်း ထွက်ပြေးရတာ သိပ်တော့ မခက်ဘူးထင်ပါ့။ ထွက်ပေါက်က အကျယ်ကြီးပဲဥစ္စာ။ နေ့ခင်းဆိုလည်း လင်းထိန်နေတာပဲလေ။
ငလျှင်လှုပ်ရင်တော့ တစ်ခါတည်း ပွဲသိမ်းပဲ ထင်တယ်။ (ဆိုးကျိုး)
September 2, 2011 at 2:35 PM
တခါတရံ အေးဆေးငြိမ်သက်ဖွယ် ဒီလိုအိမ်လေးထဲမှာ သွားနေကြည့်ချင်တယ်။ သဘာဝဘေးအန္တရယ်တွေကို မစဉ်းစားပဲနဲ့ နေချင်တယ်။ ညဘက်အိမ်ကိုမြင်ရတဲ့ မြင်ကွင်းလေးကို သဘောအကျဆုံးပဲ..
September 2, 2011 at 2:49 PM
မြေအောက်အိမ်ဆိုပေမယ့် တအိမ်လုံးမဟုတ်ဘဲ အိမ်တခြမ်းဘဲမြေအောက် တခြမ်းက open ဖြစ်နေတဲ့အတွက် လေ၀င်လေထွက်ရလို့ အဲဒီလောက် အသက်ရှူမကျပ်ဘူး ထင်တယ်နော်...
ဒုတိယပုံကို ကြိုက်တယ်၊ ခြံထဲမှာ အဲလို စာထိုင်ဖတ်ချင်တယ် ...
September 2, 2011 at 6:51 PM
အိမ်တွေ ကောင်းလှချည်လား။ မချောကတော့ ရှာဖွေ တတ်သဗျ။
September 2, 2011 at 7:31 PM
မိုးကြီးရင်တော့ ဘီလိုလုပ်မတုန်းအေ၊ ဒါထက် ပြူတင်းပေါက်က ထွက်ငေးချင်ရင်ရော....။ ဟိ...။ ဆန်းပေ လှပေမဲ့ ရွာကအိမ်လေးတွေပဲ စီဘောကျလယ်....:))
September 2, 2011 at 9:03 PM
ထူးဆန်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတယ် မချောရေ.. ဘယ်မှာများသွားရှာတွေ့တာလဲ.. သူတစ်ယောက်ထဲနေတာလား မိသားစုနဲ့နေတာလားမသိဘူးနော်.....
အားရင် အလည်ခဏလာပါဦးနော် အစိမ်းရောင်ကြိုက်တဲ့မမအတွက် အစိမ်းရောင်ဆိုင်ကယ်လေး လက်ဆောင်ပေးချင်လို့ပါ..
September 3, 2011 at 2:00 AM
အခုလ်ို မိုးတွေ သည်းသည်းမည်းမည်းရွာတဲ့ ကာလမျိုးဆို၇င်တော့ ဘယ်လိုနေမယ်မသိဘူး ဒေါ်ချောရေ...အိမ်ကလေးကတော့ လှတော့အလှသားကပဲ...အလကားရရင်တော့ သုံးလေးလလောက် အစမ်းနေကြည့်ချင်သား...
September 4, 2011 at 11:50 AM
စိတ်ဝင်စားတယ်ဗျာ။ နေချင်စရာလေး။ ရှာကြံတင်ပေးတာကျေးဇူးပါ။ စိတ်ကူးနဲ့ပုံဖော်ကြည့်ပါဦးမယ်။ နေရရင် ဘယ်လိုနေမလဲလို့။
September 5, 2011 at 10:40 PM
ကောင်းလိုက်တဲ့ စိတ်ကူးလေး။ အဲဒီလို နေရာမျိုးမှာ တပါတ်လောက်ဖြစ်ဖြစ် သွားနေချင်လိုက်တာ။